thinzar's blog: October 2007
Labels: computer/IT, posts in english
FYP CS showcase
Final Year Project showcase မနေ့ကဘဲ ပြီးသွားပါတယ်။ review ကို စာမေးပွဲ ပြီးတော့ အားမှဘဲ ရေးတော့မယ်။ လာရောက် အားပေးသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကော၊ YM, gtalk, blog ကနေ အားပေးတဲ့ သူတွေကိုကော အထူးဘဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (သဉ္ဖာ့ project က အောက်ဆုံးတစ်ခု.. ပိုစတာ လှတယ်မလား။ သဉ္ဖာလုပ်ထားတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဟီး...) Wednesday က တစ်ညလုံး ပြင်ဆင်နေလို့ အိပ်တောင် မအိပ်လိုက်ရဘူး။ မနေ့ကလည်း တစ်နေကုန် (10:00AM - 5:00PM) ရပ်ပြီး စကားတွေဘဲ ပြောနေရတော့ တော်တော် ပါးစပ်ညောင်းသွားတယ်။ နေ့လည်စာတောင် မစားလိုက်ရဘူး။ တစ်နေကုန်လုံး စမူဆာ သုံးခုနဲ့ ပြီးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးတော့လည်း ပြီးသွားတာဘဲ..
Overall, I'm satisfied with it!!! Thanks to everyone .. FYP supervisor, coordinator, my group mate, all my other FYP mates and everyone who has directly and indirectly helped us..
ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် ဘာတွေ ဖြစ်နေပြီလဲ မသိတော့ဘူး။
အခန်းထဲက နာရီလည်း ရပ်နေတာ သုံးပါတ်လောက် ရှိပြီ။ ဓာတ်ခဲ ဝယ်ဖို့ မေ့မေ့နေတယ်။ အိပ်တဲ့ စားတဲ့ အချိန်တွေလည်း ကမောက်ကမ.. မနက် ၆ နာရီကနေ နေ့လည် ၁ နာရီက အိပ်ချိန် ဖြစ်နေတယ်။ ဝယ်ကတည်းက ပျက်နေတဲ့ printer တစ်လုံးကို လည်း ပြင်မလို့ လုပ်နေတာ သုံးလလောက်တောင် ရှိပြီ။ အခုထိ မပြင်သေးဘူး။ ဖိနပ်ပြတ်သွားတာလည်း လေးလလောက်ရှိပြီ။ ဝယ်ဖို့မေ့နေလို့ သူများ ဖိနပ် ငှားစီးနေရတယ်။ assignment တွေလည်း မပြီးသေးဘူး။ ဆရာတွေနား project extension မတောင်းစဖူး သွားတောင်းနေရတယ်။ လူလဲ လူနဲ့ သိပ်မတူချင်တော့ဘူး။
Hope everything will get back to normal after the FYP presentation!! ~ sigh ~
(project မပြီးသေးဘဲ ဘာလို့ ဘလော့ဂ်ရေးနေတာလဲ။ သွား.. မြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်။
Guess how busy am i.. time is running out... only 17 days to go!!!
During the final week of semester as usual, i have becomeamulti-tasking lady.
Why not giveaguess what things i'm up to??? =)
My last 20 days of beingastudent
Some of you might get little surprised if i say i went to school at the age of two andahalf (of course it'sapre-school anyway)?? It's quite common in my country. Thinking back, from that age till now, about 20 years, I spent my life more at school rather than at home.
My student life approaches to an end (maybe forafew years or forever). When i noticed there is only 20 days left for me beingastudent, it makes me think about my life "Thinzar -astudent". :)
Hardly could i remember in my life so far that i havealong vacation. During my primary & high-school life, i was at BEHS from June to February and went to chinese school during whole summer vacation. After high school board exam, i was back at Chinese school again till i started my college. A month after I finished my second year in Myanmar, i continued my days as university student here in IIUM. Never did i had vacation more thanamonth.
After 20 days, Thinzar is no moreastudent. Am i happy or sad???? I also have no answer.
BEHS - Basic Education High School